Lips - Omyanmar
- - - - T Shirt
- - - - Shirt
- - - - Sport Shirt
- - - - Belt Wallet
- - - - Body Fit
- - - - Boxer
- - - - Neckties
- - - - Sock
- - - - Short Shirt
- - - - Stiff Coloum
- - - - Style Pants
- - - - Vest
- - - - Brief
- - - - Watch
- - - - Scarf
- - - - Shawl
- - - - Lace & Fabric
- - Fan
- - Washing Machine
- - Vaccum Cleaner
- - Blender
- - Airfryer
- - Airfryer Accessories
- - Juicer
- - Induction Cooker
- - Meat
- - Coffee Maker
- - Air Cleaner
- - Infracare
- - Shaver
- - Hair Dryer
- - Hair Straightner Curler
- - Hair Styler
- - Epilator
- - Air Con
- - Air Cooler
- - Thermopot
- - Kettel
- - Cooker
- - Toaster
- - Oven
- - Cleaner
- - Food Processor
- - Food Streamer
- - Soy Milk Maker
- - Espresso Machine
- - Hair Clipper
- - Grooming Set
- - Desktops
- - - - UPS
- - - - Casings
- - - - Power Supply
- - - - Case Cooling
- - - - CPU Cooling
- - - - Motherboard
- - - - Memory Stricks
- - - - Graphic Card
- - - - External Drive
- - Projectors
- - Printers
- - - - Charager
- - Mobilo
- - - - Skin Care
- - - - Faical Care
- - - - Faical Form
- - - - Deodorant
- - - - Shower
- - - - Lip Care
- - - - Cosmetics
- - - - - - Eyes
- - - - - - Lips
- - - - - - Base & Primer
- - - - Hair Care
- - - - - - Body Lotion
- - Perfume
- - Zar Ni Ni Htway
- - Broochs
- - Hand Chain
- - Earings
- - Blanket
- - Settee
- - Towel
- - Mattress
- - Pillow
- - Wardrobe
- - Bedsheet
- - - - Sunflower Oil
- - - - Olive Oil
- - Ballpens
- - Correction Pens
- - Penciles
- - Punchs
- - Staplers
- - Baby Accessories
- - Baby Bottels
- - Diaper Wipes & Refills
- - Toys and Games
- - Baby Safety Products
- - Baby Bottle Accessories
- - Baby Feeding Accessories
- - Baby Feeding
Proceed to checkout Navigation Clothing, Shoes & Jewelry Fashion
Beauty & Health Men
Home & Office Household wear
Electronics & Computers Electronics
Smart Phones & Tablets Smart Phones
Toys, Kids & Baby B​aby Products
Baby Safety Products Baby Bottle Accessories Baby Feeding Accessories Baby Feeding
Zar Ni Ni Htway
Special Counter C'Care
Shwe Lamin Nagar Co., Ltd.
Full Bright Myanmar (FBM)
Htoo Char Aung Kyaw
CategoriesFashionMenWomenBooksElectronicsFanWashing MachineVaccum CleanerBlenderIronAirfryerAirfryer AccessoriesJuicerGrillInduction CookerMeatCoffee MakerAir CleanerInfracareShaverTrimmerHair DryerHair Straightner CurlerHair StylerOthersEpilatorAir ConWater HeaterAir CoolerThermopotKettelCookerToasterMixerOvenCleanerFood ProcessorFood StreamerSoy Milk MakerEspresso MachineHair ClipperGrooming SetCameraComputersDesktopsAccessoriesMonitorsNotebooksProjectorsPrintersHeadsetsLaptopsSmart PhonesAccessoriesMobiloLGHTCHuaweiSamsungSonyOPPOVIVOLenovoGioneeBeauty and HealthMenWomenmedicinePerfumeArt & CraftZar Ni Ni HtwayJewelleryNecklacesBanglesBroochsHand ChainEaringsRingsPendantsHousehold wearBlanketPillowTowelBedsheetMattressSetteeWardrobeOfficewearFood & Beverage OilStationaryBooksBallpensCorrection PensPencilesPunchsStaplersTabletMobiloB​aby ProductsBaby AccessoriesBaby Bottels Diaper Wipes & RefillsToys and GamesBaby Safety Products Baby Bottle Accessories Baby Feeding Accessories Baby FeedingGadgetsAbout us
Beauty and Health>Women>Cosmetics>Lips
Lips There are 11 products.
လှပပြီးတောက်ပသော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံရရှိစေရန် Beautifying Lip Smoother မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ ပါးလွှာပေါ့ပါးပြီး ပိုးသားလေးလို နူးညံ့ချော့မွတ်စေသော နည်းပညာ နှင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးသောကြောင့် ပြည့်တင်းပြီး ချော့မွတ်သော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကို ရရှိစေပါသည်။
Ks7,250 Add to cart
Trement ပါဝင်သောကြောင့် Lip Balm အမျိုးအစား နှုတ်ခမ်းနီက နှုတ်ခမ်းသားကွဲအက်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း ပျက်စီးမှုများကို သိသာစွာပျောက်ကင်းစေပြီး စိုပြေတောက်ပသော အရောင်များနှင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင်များကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Ks9,600 Add to cart
LUMINIOUS LIPS LIPSTICK
Luminious Lips Lipstick က ရွှန်းစိုတောက်ပတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတစ်စုံကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရရှိစေမှာပါ။ နှုတ်ခမ်းနီအသား မထူမပါးဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို ချော့မွတ်စေကာ Hyaluronic Acids ပါဝင်သောကြောင့် နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့ခြင်း မရှိဘဲ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းစေပြီး ပြည့်တင်းသော နှုတ်ခမ်းလေးသဖွယ် ခံစားရစေပါသည်။ အသားရောင်မှာ အရောင်တောက်တောက်လေး အထိ အရောင်ပေါင်း (၁၄) ရောင်...
Ks7,800 Add to cart
အရောင် (၁၆)ရောင်ရှိပြီး Jelly လေးလိုချောမွတ်ရွှန်းစိုပြီး နှုတ်ခမ်းသားကို တနေ့လုံးစွဲထင်းစေပါတယ်။ ရေဓာတ်ကိုလည်းထိန်းညှိပေးပါတယ်။
အရောင်ခြယ်စွမ်းအားမြင့်မားပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့နှုတ်ခမ်းနီ ဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားစဉ် နှုတ်ခမ်းသားမှာ ပေါ့ပါးပြီး ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိပါ။ အဆင့်မြင့် အလူမီနီယံ အဖုံးနှင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အရောင် (၈) ရောင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Ks10,000 Add to cart
Super Red FLAWLESS
မိတ်ကပါအများကြီးမလိမ်းတတ်တဲ့ ပျိုမေတွေရဲ့ လှပနုနယ်မှုအတွက် သွာလေရာဆောင်ထားရမဲ့.....
Ks98,000 Add to cart
Super Red Romance
အချစ်ရဲ့ သင်္ကေတ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုစိတ်ကူးယဉ် အနမ်းများကိုဖန်တီးပေးမဲ့..... Romance
Super Red Diva
ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ အမျိုးသမီး ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပြုံး ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို ဖြတ်သန်းဖို့ သူငယ်ချင်းကောင်း... Diva
Lip Gloss (01 Invisible Pink)
Lip Gloss 01 Invisible Pinkနူတ်ခမ်းနီ အဆီ
Ks5,800 Add to cart
Lip Gloss (02 Auntumn Peach)
Lip Gloss 02 Auntumn Peachနူတ်ခမ်းနီ အဆ
Lip Gloss (04 Glazing Plum)
Lip Gloss 04 Glazing Plumနူတ်ခမ်းနီ အဆ
2016 Powered by iBiz Service Provider. All Rights Reserved Accept